Akụkọ - Ngwa nke igwe nkpuchi, njigide ya na njirimara ọrụ ya
Njirimara arụmọrụ na ụkpụrụ ọrụ nke njigide electromagnetic nke ngwa nke igwe nkpuchi. Igwe electromagnetic bụ ngwa mmepụta ihe dị mkpa nke igwe nkpuchi. A ọma akpa ipigide nwere ike melite na-arụ ọrụ arụmọrụ nke nkpuchi igwe na-azọpụta ndị ụlọ ọrụ manpower na ihe onwunwe akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhọrọ nke ọma Electromagnetic ipigide, anyị kwesịrị ịghọta njirimara arụmọrụ ya na ụkpụrụ ọrụ ya.
Ngwa nke nkpuchi igwe electromagnetic ipigide njirimara ya
Mgbe agbanyere ugbu a, a na-eme ike magnet na mgbe ahụ efere "armature" na-arụ ọrụ. The ipigide ke aku steeti. Mgbe ebipụla nke ugbu a, eriri igwe ahụ anaghị agbanye ume na "armature" ahụ mepere emepe, njigide ahụ nọ n'ọnọdụ disengaged.
1. Mfe nzukọ na mmezi: Ọ bụ nke static udi nke magnetik ubi eriri igwe agbakwunyere na bọl agba, ya mere ọ dịghị mkpa na-wepụ n'etiti isi ma ọ bụ jiri a carbon ahịhịa, na ọ dị mfe iji.
2. High-ọsọ nzaghachi: N'ihi na ọ bụ a akọrọ ụdị, ndị torque na-ebute site ná ngwa ngwa, na-adaba adaba omume nwere ike nweta.
3, ike siri ike: ezigbo ikpo ọkụ ọkụ, na iji ihe ndị dị elu, ọbụlagodi maka nnukwu oge na ike dị elu, ọ na-adịgide adịgide.
4, ihe a bụ n'ezie: iji isi iyi ndị nwere ụdị efere, ọ bụ ezie na ịma jijiji siri ike agaghị ewepụta omume rụrụ, ọfụma.
Workingkpụrụ ọrụ nke electromagnetic ipigide nke igwe nkpuchi: akụkụ na-arụ ọrụ na akụkụ a na-achịkwa nke njigide nke electromagnetic na-eji esemokwu n'etiti ebe kọntaktị, ma ọ bụ jiri mmiri mmiri dị ka onye na-ebufe nnyefe (njikọ hydraulic), ma ọ bụ jiri nnyefe magnet (njigide nke electromagnetic) .
Principlekpụrụ ọrụ nke njigide electromagnetic nke ngwa nke igwe nkpuchi
Nkọwa nke ụkpụrụ na-arụ ọrụ nke njigide nke electromagnetic nke ngwa nke igwe nkpuchi: Ihe nkedo nke nkedo nke na-akwọ ụgbọala na-ebu efere esemokwu na-arụsi ọrụ ike, nke nwere ike ịkwaga n'enweghị ihe ọ bụla. N'ihi njikọ njikọ spline ahụ, ọ ga-agbagharị ya na okporo ụzọ ya. A na-atụkọta efere esemokwu ahụ na efere esemokwu a na-akwọ ụgbọala, a na-ejikwa akụkụ convex nke mpụga dị na aka aka edozi ya na akụrụngwa a na-akwagharị, yabụ efere esemokwu ahụ nwere ike ịgbaso ngwongwo ahụ, ọ nweghị ike ịtụgharị mgbe na-akwọ ụgbọala aro rotates. .
Mgbe eriri igwe ahụ dị ike, a na-adọta mbadamba esemokwu ahụ na isi ígwè ahụ, a na-adọkwa ogwe aka ahụ, a na-ejidekwa esemokwu ọ bụla. Dabere na esemokwu dị n’etiti nna ukwu na esemokwu esemokwu, ihe a na-anya agba na-agbagharị na okporo ụzọ. Mgbe eriri igwe ahụ gbanyụrụ, eriri igwe ahụ etinyere n'agbata esemokwu dị n'ime na n'èzí na-eweghachi armature na esemokwu esemokwu ahụ, njigide ahụ efunahụ mmetụta nke ibugharị igwe. Otu njedebe nke eriri igwe ntinye DC ike site na ahịhịa na mgbanaka amị, na njedebe nke ọzọ nwere ike ịdabere.